Weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay Safaaradda Mareykanka ee Ankara | Warfaafiye
Warfaafiye Somali News	Weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay Safaaradda Mareykanka ee Ankara
Qarax ay ku dhinteen labo ka tirsan ilaalada Safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Ankara ayaa maanta ka dhacay bannaanka hore ee safaaradda Maraykanku, waxaana la sheegay in labada qof ee dhimatay ay ahaayeen ilaalada safaaradda.
Sida ay sheegayaan dad goobjoogayaal ah qaraxa ayaa waxaa fuliyay qof isa soo miidaamiyay oo iridka safaaradda isku qarxiyay.
Saraakiisha ciidamada Turkiga iyo muuqaalo laga helayay kaamirooyinka ayaa sheegaya in qaraxa ahaa qof isku soo rakibay waxyaabaha qarxa.
labo qof ayaa sidoo kale la sheegay in ay ku dhaawacmeen qaraxaasi, waxaana durbadiiba goobta gaaray gaadiidka gurmadka deg dega iyo gaadiidka dab damiska.
Cid sheegatay ilaa hada ma jiro qaraxaasi dhaliyay khasaaraha dhimashada iyo burburka dhismooyinka safaarada iyo kuwa ku xeeran.
Sannadkii 2008-dii, ayaa kooxo hubeysan ay soo weerareen dhismaha safaarada Mareykanka uu ku leeyahay Stanbul, waxaana weerarkaasi ku dhintay saddex nin oo kuwii weerarka soo qaaday iyo saddex boolis ah.
Recent CommentsAbati kiristian on Qaxootiga Soomaalida Holland oo mudaaharaad dhigay: Sawirrocali bashi on Qaxootiga Soomaalida Holland oo mudaaharaad dhigay: SawirroXamarCadeey on Soomaali oo magac ku raadineyso caayda Diinta Islaamkaمستشار الشياطين on Sydney oo weerar Argagixiso u ka socda: Daawo Videocabdi kuumade galmeys on Cumar C/rashiid oo R/Wasaaraha dalka Somalia noqonaya	Recent Posts	Madaxweyne Xasan oo la kulmay Madaxweynaha Somaliland